DAAWO:Gobolada Sool & Sanaag war cusub kasoo kordhay & Wasiir madaxweynaha ugu baaqay in uu is casilo
November 10, 2019 Mahad Jama 2
BADHAN(P-TIMES)- Iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay sii xoogaysanayeen xiisadaha ka aloosan goboladda Sool iyo Sanaag oo ay ka taagan tahay kala qaybsanaan xoogan ayaa waxaa arimahaasi ka hadlay wasiirkii hore ee Biyaha Somaliland Baashe Cali Jaamac oo haatan kamid ah xisbiga Mucaaridka ah ee Waddani.
Siyaasi Baashe Cali Jaamac ayaa sheegay in xaalado adag ay haatan ka taagan yihiin gobolka Sool isla markaasna ciidamada Somaliland ay ka gaystaan falal kala duwan oo ay kula kacayaan shacabka, isagoona sheegay in layskaba ilaawaya xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Arimaha doorashada ayuu ku dheeraaday wasiir Baashe, waxaana uu sheegay in xiligani uusan diyaar u ahayn maamulka Biixi qabsoomida doorashooyin ka dhacay Somaliland iyo in la xoojiyo lagana wada shaqeeyo nabadeynta gobolka Sanaag.
Mar wax laga weydiiyey siyaasada xisbiga Waddani ayuu sheegay in uu yahay xisbigoodu uu yahay mid leh siyaasad degan isla markaasna uu ka dhaxeeyo wada tashi iyo isku tanaasul balse uu waayey cid uu la macaamilo.
Ugu dambeyntii waxa uu ku baaqay Baashe Cali Jaamac in xilka laga tuuro madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi si go’aan midaysan ay u wada qaataan Beelaha kasoo jeeda Somaliland iyo bulshada ku dhaqanka goboladda Bari.
Kaas warkiisu qabasha malaha( Koore) awalba caadaqaate xun buu ahaa, ee lagu shaqeysto waana nin diciifa, aadna u af xun.
Nin dhaqaalo la siiyo ku shaqeeya hadalkiisu wax ka soo qaad ma leh ee iska ilaawe.Nin Daarood ah oo hargeeysa danihiisa u jooga hadalkiisu kama duwana Waraabe ciyey ee qashinka ku dara.